KIO Covid-19 ကာကွယ်ရေးကော်မတီဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း - Kachin News Group (KNG) ,
ဝက်လက်နယ် တိုက်ပွဲတွင် ၂ဖက်တပ် အကျအဆုံးများဟုဆို
ဒီပဲယင်းတွင် လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် ကျေးရွာ ၂ခုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
ဆားလင်းကြီးနယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ် သေနတ်လိုက်လံပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူ ၂ဦးထိမှန်
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် PDF တပ်သား ၄ ဦးအနက် ၂ ဦးကို ထောင်တွင်းသတ်ဖြတ်ခံရဟုဆို
ကသာတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးထံမှ ဆေးခြောက်တွေ့ရှိသဖြင့် ပြည်သူ ၁၃ဦးကို စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီး
အင်းတော်နယ်တွင် ထောင်ထားသည့် မိုင်းကြိုးစဆွဲမိသဖြင့် အမျိုးသား၂ဦးသေဆုံး
ကသာတွင် စစ်ကောင်စီ သတင်းပေးသူဟု ဆိုရသော ရာအိမ်မှူးတစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရ
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမည့် သတင်းအမှား ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ငွေရှာနေသော YouTube ချန်နယ်များကို သတိပြုရန်
ကင်းပုန်းဝပ်ပြီးပြန်လာသည့် စစ်ကောင်စီတပ် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ၅ဦးသေဆုံး
ဖားကန့်တွင် ဆယ်နှစ်အောက် ကလေး ၄ဦးအပါ ပြည်သူ ၂၀ ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲ
KIO Covid-19 ကာကွယ်ရေးကော်မတီဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
24th April 2020
KIO ၏ Quarantine နေရာတစ်ခု (ဓါတ်ပုံ – Covid19 Ninghkap Komiti)
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီသည် Covid-19 တားဆီးရေး ကော်မတီဖွဲ့ပြီး အသစ်ဝင်လာသူများကို သီးသန့် Quarantine ထားပြီးစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စောင့်ကြည့် သံသယလူနာများကို တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအကူညီဖြင့် ရောဂါပိုးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို သိရသည်။
KIO နယ်မြေများတွင် Covid-19 ကာကွယ်ရေး စီစဉ်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိန်းဝမ်ကို ကချင်သတင်းဌာန KNG မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
မေး။ ။ Covid-19 ရောဂါနဲ့ ပက်သက်ပြီး KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအားလုံးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေတာ ရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီကနေ အားလုံးကို အသိပေးကြေညာထားပြီ။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ လူတွေကို စီစစ်တယ်။ နောက်ပြီး အပြင်လူမဝင်နိုင်အောင် စီစစ်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်ထားရှိဖို့ အဲဒီအပိုင်းကို လုပ်ဆောင်နေတယ်။
မေး။ ။ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျတ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာလောက်ထိ ဆေးဝါးကုသပြုစုနိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့မှာ အခုက ဆေးကုသမယ်ဆိုရင် မလွယ်ကူဘူး။ ကမ္ဘာက အမေရိကန်တွေတောင် အများအပြားသေဆုံးနေကြတာ အဲလိုအခြေအနေကို မရောက်အောင် ကျနော်တို့က ကြိုတင်ကာကွယ်တယ်။ ဆရာဝန်စုံတဲ့ ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသနိုင်ဖို့ လုပ်ထားတယ်။ တခြားနေရာမှာတော့ ကျနော်တို့ သပ်သပ် ရောဂါကာကွယ်ရေးဘက်ကို အဓိကထား လုပ်တယ်။ ဆေးကုသပေးတာတော့ မပါဘူး။ ဌာနချုပ်မှာတော့ ဆေးကုသဖို့ သီးသန့်ဆေးရုံးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ ပုံမှန်ဆေးရုံနဲ့ မပေါင်းဘူး။
မေး။ ။ ဆေးဝါး နဲ့ စက်ကိရိယာအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ ဖျားနာတဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်မဲ့ စက်ကိရိယာတွေနဲ့တော့ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တာရှိတယ်။ အရမ်းဈေးကြီးတာတော့ မဝယ်နိုင်သလို ကိုင်သွယ်အသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေကလည်း မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ကိုင်သွယ်နိုင်တဲ့ အသုံးတည့်တယ်ဆိုတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ အောက်စီဂျင်တွေကိုတော့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။
မေး။ ။ KIO ကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ Covid-19 ရောဂါအတွက် ဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ အသုံးပြုရမယ့် PPE ဝတ်စုံတွေ ၊ 95 တွေ ၊ Sodium Chloride တွေ ၊ အရက်ပျံ တွေ ၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Mask တွေကတော့ အရမ်းလိုအပ်နေတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးကုသတဲ့ဘက်မှာဆို ဥပမာ- ICU မှာ အသုံးပြုမဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို Covid-19 ရောဂါအတွက် ထောက်ပံ့ငွေပေးတဲ့အပေါ်မှာ KIO ဘက်ကိုရော ရနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒါကို သတင်းမှာပဲကြားသေးတာ။ ကျနော်တို့ဆီကိုတော့ မရောက်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မရသေးပါဘူး။
မေး။ ။ အပြင်က ကူညီထောက်ပံ့မှုမရရင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းက ဘယ်အခြေအနေထိရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကူညီနေတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကို များသောအားဖြင့် သူတို့ကို အကူညီတောင်းပြီး ၊ တစ်ချို့ကျနော်တို့ အကူညီးတောင်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ရပါပြီ။ ကာကွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုတယ်၊ စောင့်ကြည့်လူနာဆောင်တွေမှာသုံးတယ် ၊ ပညာပေးတာတွေကိုတော့ လိုက်လုပ်နေပြီ။ ထောက်ပံ့ငွေအကြီးကြီးတော့ မရသေးပါဘူး။ အကူညီတောင်းထားတာပဲရှိသေးတယ်။
မေး။ ။ Covid-19 ရောဂါကြောင့် အဓိကအခက်အခဲတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ လူဝင်လူထွက်ပိတ်လိုက်တယ် ၊ လမ်းခရီးတွေ ပိတ်ကုန်တော့ စက်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းဖို့ခက်တယ် ၊ အစားအသောက်တွေ ခက်ခဲလာတယ်။
မေး။ ။ Covid-19 ရောဂါနဲ့ ပက်သက်ပြီး KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေက နောက်ဆုံးအနေ ဖြည့်စွပ်ပြီး ဘာပြောချင်သေးလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ဒီမှာက တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကူညီနေတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း တခြား ကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်။
Tags: Covid 19 KIO Covid-19
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ကချင်လူထု၏အမြင်များ
အပြင်ထွက်ခွင့်တားမြစ်ခံရခြင်းကြောင့် လီဒိုလမ်း စစ်ရှောင်များအခက်တွေ့
ကုသမှုထက် ကာကွယ်ခြင်းက ပိုထိရောက်ပါတယ်
Covid-19 Reporting (199)
ELTV Program (6)
Fact Check (8)
မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (43)
The Kachinnews or kachinnews.com is an independent ethnic Kachin multi-media organization and covering news from Burma (Myanmar), regional and around the world.
Archives Select Month July 2022 (15) June 2022 (118) May 2022 (116) April 2022 (111) March 2022 (69) February 2022 (69) January 2022 (66) December 2021 (51) November 2021 (50) October 2021 (91) September 2021 (89) August 2021 (64) July 2021 (64) June 2021 (44) May 2021 (97) April 2021 (63) March 2021 (59) February 2021 (40) January 2021 (45) December 2020 (34) November 2020 (46) October 2020 (45) September 2020 (42) August 2020 (28) July 2020 (48) June 2020 (47) May 2020 (40) April 2020 (48) March 2020 (33) February 2020 (31) January 2020 (34) December 2019 (26) November 2019 (20) October 2019 (14) September 2019 (20) August 2019 (33) July 2019 (32) June 2019 (22) May 2019 (12) February 2019 (2) March 2018 (1) August 2016 (1) July 2016 (5) March 2015 (2) February 2015 (9) January 2015 (15)
Facebook-f Phone-alt Facebook-messenger Envelope Twitter Youtube
© 2019, Kachin News Group (KNG). All rights reserved